रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधे अझै कति मान्छे मार्ने? (भिडियो) – दैनिक नेपाल न्युज
रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधे अझै कति मान्छे मार्ने? (भिडियो)
काठमाडौं । काठमाडौंको चावाहिलमा रहेको ओम अस्पतालमा पत्थरीको शल्यक्रिया गर्दा धादिङको गंगाजमुना गाउपालिकाकी २९ वर्षीया अनिता गुरूङको अस्पालको गम्भीर लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको आफन्तले आरोप लगाइरहेपनि आफन्तले २० लाख नदग लिएपछि घटना शान्त भयो ।
अनिताको मृत्यु भए लगत्तै चिकित्सककै लापरबाहीका कारण उनको मृत्यु भएको आरोपमा आफन्तले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेर हंगामा न मच्चाए । ओम अस्पतालका युरोलोजिस्ट तथा प्रोफेसर डाक्टर भोलाराज जोशीले अनिताको अपरेशन गरेका थिए । आफन्तका अनुसार अस्पतालले सामान्य शल्यक्रिया गर्ने भनेको थियो ।
अनिता पनि हाँसी–हाँसी अप्रेशन थिएटर भित्र गएको भए पनि अचानक कसरी मृत्यु भयो ? ओम अस्पतालमा यस अघि पनि धेरैले उपचारका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् । यही प्रश्न रवि लामिछानेले ओम अस्पतालका एमडिलाई सोधेका छन् ।